musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Aeromexico inonyorera Chitsauko 11 Chirongwa Chekugadzirisazve
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Kufayirwa kweChirongwa idanho rakakosha munzira yeAeroméxico yekubuda kubva muChitsauko 11 maitiro, uye Kambani inotarisira kuramba ichitaurirana nevanobata navo kupedzisa Chirongwa ichi vachibvumirana.
Aeromexico inonyorera Joint Chirongwa chekugadzirisa zvakare, chirevo chekuzivisa kuChirongwa uye danho rekubvumidza nzira dzekukumbira zvine chekuita neChirongwa.
Aeromexico ichaenderera ichiteedzera, nenzira yakarongeka, kugadzirisa kwayo mari nekuzvidira kuburikidza neChitsauko 11.
Aeromexico icharamba ichisimbisa mamiriro ayo emari uye kushomeka uye kuchengetedza nekuchengetedza mashandiro ayo uye zvinhu.
Grupo Aeroméxico, SAB de CV yakazivisa kuti yakamhan'arira, pamwe chete nezvikwereti zvayo zvinechikwereti muKambani Chitsauko 11 chirongwa chekuzvidira chekugadzirisa zvemari, iyo Joint Chirongwa chekugadzirisa zvakare, chirevo chekuzivisa chakanangana neChirongwa uye danho rekubvumidza nzira dzekukumbira nekuremekedza kuChirongwa.
Aeroméxico inotarisira kuisa imwechete kana yakawanda zvinowedzera kuChirongwa pane zvakatarwa muChirongwa kana sekurairwa neimwe Dare. Kunzwa kwekubvumidza Chirevo Chekuzivisa chinotarisirwa kuitwa musi waGumiguru 21, 2021 kana wapinda.
Aeroméxico ichaenderera ichiteedzera, nenzira yakarongeka, kugadzirisa kwayo mari nekuzvidira kuburikidza neChitsauko 11, ichiri kuenderera mberi nekupa nekupa masevhisi kune vatengi vayo uye kuita kondirakiti kubva kune vanotengesa zvinhu uye masevhisi anodikanwa ekuita.
Aeroméxico ichaenderera ichisimbisa mamiriro ayo ezvemari uye kushomeka, kuchengetedza nekuchengetedza mashandiro ayo uye zvinhu, uye nekugadzirisa zvakafanira kudzikisira mhedzisiro ye COVID-19.
Aerovías de México, SA de CV inoshanda seAeroméxico, inendege inotakura mureza yeMexico, iri kuMexico City. Inoshanda masevhisi akarongwa kunzvimbo dzinopfuura makumi mapfumbamwe kuMexico; Maodzanyemba, Maodzanyemba neCentral America; iyo Caribbean, Europe neAsia.